XOG: Musiibaada Qoom, Waa Faa'iida Qoom Kale, Waa Kuwan Shanta Kooxood Ee Ganaaxa Man City Ee Champions League Ka Faa'iidaysanayaa. - Gool24.Net
XOG: Musiibaada Qoom, Waa Faa’iida Qoom Kale, Waa Kuwan Shanta Kooxood Ee Ganaaxa Man City Ee Champions League Ka Faa’iidaysanayaa.
February 15, 2020 Mahamoud Batalaale
Kadib go’aanka culus ee ka soo baxay UEFA ee ganaaxa loogu riday Manchester City waxaa jira kooxo badan oo ay farxad u tahay. Musiibada qoom waa faa’iidada qoom kale waana arinta ay City hadda la kulantay.
Isbadal ayaa ku dhici doona qaabkii kooxaha Premier league ugu soo bixi jireen Champions League iyada oo kaalinta ay Man City gashaa noqon doonto mid aan loo xisaabin doonin kooxaha Ingiriiska.
Haddii markii hore ay Champions League u soo baxeen afarta kooxood ee ugu sareeyaa, hadda shanta kooxood ee Premier League ugu sareeya ayay afar ka mid ahi soo bixi doonaan iyada oo kaalinta Man City aan la xisaabin doonin.
Tusaale ahaan sida ay hadda u taagan tahay, Liverpool, Leicester City, Chelsea iyo Sheffield United ayaa u soo bixi lahaa Champions League waana shanta kaalmood ee ugu sareeya iyada oo kaalinta Man City aan la xisaabin doonin.
Waxayna tani la micno tahay in halkii kaalinta afraad loo ordayay ay hadda ku soo biirtay kaalinta shanaad taas oo kooxo badan rajo wayn u abuurtay.
Kooxaha Sheffiled United, Tottenham, Everton, Manchester United, Wolves iyo Arsenal ayaa dhamaantood hadda haysata fursad ay ugu soo bixi karaan Champions League.
Sida ay hadda u muuqato kooxaha Liverpool, Leicester City iyo Chelsea ayaa ah kuwa afarta kaalmood ku dhamaysan kara laakiin wali kaalinta shanaad waxaa loogu soo bixi karaa Champions League kadib ganaaxa la saaray Man City.
Laakiin waxaa jira fursad kale oo kooxahan badan rajadooda dili karta waana in kooxda ku guulaysan doonta koobka FA Cupka kaas oo isna loogu soo bixi karo Champions League haddii uu FA-gu go’aansado in fursad loo abuuro kooxda ku guulaysan doonta FA Cupka.
Hadii ay dhacdo in kooxda ku guulaysata FA Cupku ay u soo bixi karto Champions League, waxaa markaas la eegi doonaa in ayna noqon koox marka hore u soo baxaysay oo afartii kaalmood ee sare ku dhamaysanaysa, waa in ayna Man City oo ganaax ku dhacay noqon balse go’aankani waa mid u yaala FA -ga.
Laakiin arinta hubaasha ahi waa in Manchester City ay ganaax kaga maqnaan doonto Champions League labada xili ciyaareed ee soo socda xataa haddii ay horyaalka ku guulaysato, taas oo la micno ah in min kaalinta 1- 5 aad ay Champions league u soo bixi doonaan iyada oo haddii ay City ku jirto laga saari doono liiska.
Kooxahee Champions League U Soo Bixi Lahaa Hadda Haddii uu Xili ciyaareedku dhamaan lahaa?
2- Leicester City
4- Sheffield United
Laakiin kulamada baaqiga ka ah xili ciyaareedkan ayaa si rasmi ah u go’aamin doona afarta kooxood ee xili ciyaareedka soo socda England ku matali doona Champions League.
Sidaa daraadeed, kooxaha Sheffiled United, Tottenham, Everton, Manchester United, Wolves iyo Arsenal ayaa ah kooxaha sida wayn uga faa’iidaysan kara ganaaxa Man City ee Champions League.